Save and Gain စျေး - အွန်လိုင်း SANDG ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Save and Gain (SANDG)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Save and Gain (SANDG) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Save and Gain ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 047.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Save and Gain တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Save and Gain များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Save and GainSANDG သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.003Save and GainSANDG သို့ ယူရိုEUR€0.00254Save and GainSANDG သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0023Save and GainSANDG သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00273Save and GainSANDG သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0267Save and GainSANDG သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0189Save and GainSANDG သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0664Save and GainSANDG သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0112Save and GainSANDG သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00397Save and GainSANDG သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0042Save and GainSANDG သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0666Save and GainSANDG သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0233Save and GainSANDG သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0161Save and GainSANDG သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.225Save and GainSANDG သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.507Save and GainSANDG သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00412Save and GainSANDG သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0046Save and GainSANDG သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0932Save and GainSANDG သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0208Save and GainSANDG သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.321Save and GainSANDG သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3.56Save and GainSANDG သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.16Save and GainSANDG သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.22Save and GainSANDG သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0824
Save and GainSANDG သို့ BitcoinBTC0.0000003 Save and GainSANDG သို့ EthereumETH0.000008 Save and GainSANDG သို့ LitecoinLTC0.00006 Save and GainSANDG သို့ DigitalCashDASH0.00003 Save and GainSANDG သို့ MoneroXMR0.00003 Save and GainSANDG သို့ NxtNXT0.234 Save and GainSANDG သို့ Ethereum ClassicETC0.000442 Save and GainSANDG သို့ DogecoinDOGE0.866 Save and GainSANDG သို့ ZCashZEC0.00004 Save and GainSANDG သို့ BitsharesBTS0.0924 Save and GainSANDG သို့ DigiByteDGB0.096 Save and GainSANDG သို့ RippleXRP0.0107 Save and GainSANDG သို့ BitcoinDarkBTCD0.000103 Save and GainSANDG သို့ PeerCoinPPC0.00995 Save and GainSANDG သို့ CraigsCoinCRAIG1.37 Save and GainSANDG သို့ BitstakeXBS0.128 Save and GainSANDG သို့ PayCoinXPY0.0524 Save and GainSANDG သို့ ProsperCoinPRC0.376 Save and GainSANDG သို့ YbCoinYBC0.000002 Save and GainSANDG သို့ DarkKushDANK0.963 Save and GainSANDG သို့ GiveCoinGIVE6.5 Save and GainSANDG သို့ KoboCoinKOBO0.684 Save and GainSANDG သို့ DarkTokenDT0.00276 Save and GainSANDG သို့ CETUS CoinCETI8.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 04:45:02 +0000.